भुुवनहरि सिग्देल शनिवार, चैत ५, २०७३ 1368 पटक पढिएको
भाइ श्रीराम र दुवैजना कोठामै थियौं । हाम्रा कान सुसाए । अब यो घरको बास पनि सकियो भनेर भोलिपल्टैदेखि डेरा नं. ४ को खोजीमा जुटिहाल्यौं ।
ब्रह्मटोलको एउटा पुरानो घरमा कोठा भेटियो । उभिन नहुने होचो । सानो किचन र ठीकैको कोठा । छिँडीमा पानीको धारा भएको, चर्पी नभएको, त्यो घरमा घरभेटी नबस्ने, भाडादर मासिक १२ रुपैयाँ !
‘ल ट्यै नेसनल टेर्लिङ खुलेको छ नि अहिले, त्यो डेखि पूर्वको । पचली भैरवस्थान जाने बाटो भन्डा पश्चिमको । टेकुको ठूलो बाटोदेखि लिएर टल बाग्मतीसम्मको सबै हो ल ।’ उनले जग्गा चिनाए । त्यो जग्गा पूरै पोखरीजस्तो थियो । बर्खामा टन्नै पानी जम्ने, कमल उम्रेर फुलेको देखिन्थ्यो ।
उनको प्रस्तावलाई हामीले उडाइदियौं– ‘आ, साहुबा पनि । त्यस्तो धापजस्तो जग्गा कसले किन्छ ? के काम त्यो कमलपोखरी ? ’
यो जाडो याम अनि हाम्रो डेरा भने सिरान तलाको जस्ताको छानोमुनि ? कुन दुर्दशा भयो होला हाम्रो ? बिहान उठ्दा रातभरि जस्ताबाट झरेको शीतले ओढेको सिरक लपक्कै भिज्न थालेपछि हामीले घरभेटी बूढीसँग गुुहार माग्यौं । उनले केही कागजका बाक्सा दिएर भनिन्– ‘यो कागज सुत्ने ओछ्यानको माथि जस्तापातामा घुुसाए । तल शीत झर्दैन !’ हामीले यो उपाय गर्यौं‍ । शिरमाथि शीत चुुहुनु कम भए पनि बाँकी भुुइँ शीतले रामै्रसँग भिजेको हुन्थ्यो ।
यस्तै तमासा गरेर जाडो कटाइयो । फागुुनको अन्तिम हप्ता शुुक्रबारको दिन थियो त्यो । बिहानसँगै स्कुलमा पढाउने धु्रव हेडसरले उहाँको भानिज माधव शर्माको बिहेको निम्ता दिनुभयो मलाई । जन्ती जानुपर्ने लुुभुु सानागाउँमा । रातै बस्ने बिहे । ३ बजे दुलाहा अन्माउने भनिएको थियो ।
त्यही गोला खाएर सातै दिनमा मेरो कमलपित्त (जन्डिस) भाग्यो । थाहा पाइराख्नु राम्रो । यस्तो जड को मि श्रण के के हुन् ?
– बूढी बेसार (बेसारको पुरानो गानो) तीनपाउ जति
– मोनका कालो दाख (गेडा झिकेर फाल्ने) आधा पाउ
– कमल गट्टा (बीस दाना) गेडा फुटाएर भित्रको बिउमात्र
यी तीन चीज मिलाएर बेसरी कुट्ने । १४ डल्ला पारेर बिहान बेलुुका खाली पेटमा तातोपानीसँग सात दिन खाने ।
यो कमलपित्तको प्रकोप बढेर मात्रै अल्मलियो । मेरो डेरा आतंक भने उता छोडिएको छ । कमलपित्त बिसेक भयो ।